"Education for Myanmar Youths": Teaching Method and Dream !
အနှစ်ချုပ်ရလျှင် စာသင်တတ်သော၊ စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ သော၊ တပည့်တို့စိတ်ကိုသိသော ဆရာတို့နှင့် တွေ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများ ရလဒ် ကောင်းကြသည်။ သို့ဆိုလျှင် ထိုအရည်အချင်းများ ဆရာတိုင်းတွင် အဘယ့်ကြောင့် မရှိကြသနည်း။ ဆရာ သင်တန်း ကျောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်လော။ သို့မဟုတ် ထိုအရည်အချင်း တို့သည် မွေးရာပါ ဖြစ်၍ သင်ကြား၍ မရနိုင်သလော ကျွန်တော်တို့ လေ့လာသင့်လှ၏ ကျွန်တော့်ယူဆချက်မှာ ထိုအရည်အချင်း တို့သည် မွေးရာပါ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်ယူ၍ ရနိုင်ပါ၏
တပည့်ကို နားလည်အောင် သင်ကြား ပေးနိုင်သော ဆရာသည် ဆရာကောင်း။ တပည့်ကိုပါ စောင့်ရှောက်သော ဆရာသည် ပို၍ တော်သော ဆရာ။ တပည့် ကို ဘာသာရပ်၍ မသိရလျှင် မနေနိုင် လောက်အောင် စွဲဆောင်နိုင်သော ဆရာသည် အတော်ဆုံး ဟု မှတ်သား ခဲ့ရဖူး ပါသည် ။
: General Discussions, Info - Personal Accounts
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 12:26 AM
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ နအဖရဲ့ ...